Inqugwala sinombuki zindwendwe onguTeresa
Indlu yethu yembali ibekwe eBory Tucholskie. Imi kakuhle phakathi kohlaza kunye neegadi ezintle, apho kukho uxolo nenzolo. Kukho amahlathi, amachibi kunye neendlela eziphawulweyo zeNordic Walking kufutshane.
I-cottage yahlulwe yangamacandelo amabini azimeleyo / amagumbi anekhitshi kunye negumbi lokuhlambela ekwabelwana ngalo /. I-cottage ihlotshiswe kwisitayela se-rustic, ngokuhambelana nobudala bayo. I-Chata pod Strzechą ifumene iPearl kwisatifikethi saseKorona kwi-voivodeship kuj-pomorskie ngo-2009; ngo-2014. Sibambe indawo yesibini kukhuphiswano lwe-AGRO-holide lweyona ndawo ibalaseleyo yokhenketho lwasezilalini kwiKuyavian-Pomeranian Voivodeship kwaye izitiya ezisingqongileyo ziwongwe ngamawonga amaninzi. Kwizakhiwo zefama yethu, iindwendwe zinokusebenzisa iigadi ezintle, i-barbecue, indawo yomlilo, i-gazebos kunye neebhayisekile. Kuyenzeka ukuba ulobe echibini lethu kwaye ukhwele ihashe elitsalwa ngamahashe ukusuka kwifama enobungane.
Wonke umntu ofuna ukuphumla esifubeni sendalo kwaye emke kwindawo ephithizelayo yesixeko umenywa ngokufudumeleyo kwifama yethu yezolimo i-Chata pod Strzechą, apho kukho umoya wosapho kunye nexesha limile. indlu yi80 m2.
Ngaphakathi kwendlu, kwinxalenye yegadi, kukho iindawo zokuphumla - i-gazebo, i-shed, i-grills ezi-2, i-echibini, i-pool yabantwana, indawo yokudlala.
- ichibi kunye nevenkile yokutya kumgama weekhilomitha ezi-2.
Ehlotyeni le-2017, kwakukho umzobo ovulekileyo wabantwana baseBelarus.
Siyavuya ukunceda iindwendwe zethu ukuba zazi amaxabiso endawo, izikhumbuzo kunye neendawo ezinomdla